စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: အာဏာရှင်ကြီးများ၏ အတွင်းရေး - အပိုင်း(၈)
အရာရှိကြီးများက “ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ရပ်တည်ရမှာလဲ” လို့ အမိန့်နာခံဖို့ မေးတဲ့အခါမှာ ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာ အမိန့်မပေးဘဲ “မင်းတို့လည်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေ သိတာပဲ ဒို့တပ်ကို မထိခိုက်အောင်သာ ကြည့်လုပ်ကြပေ့ါကွာ” လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့  ပြောနေကျ စကားများအရ တည်မြဲ ဖဆပလဟာ တပ်နဲ့ ပိုနီးစပ်တဲ့ ယူဆချက်ဖြင့် တပ်တွေအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် တည်မြဲဘက်ကိုသာ မဲပေးအောင် လက်သိပ်ထိုး လုပ်ခဲ့ကြသည်များ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် သန့်ရှင်း အမတ်များက ပါလီမန်မှာ တပ်မတော်အရာရှိများအား ပုတ်ခတ်ပြောလာတဲ့အခါ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ထုံးစံအတိုင်း အလွန်ဒေါပွခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီအခါ တိုင်းမှူးနဲ့ တပ်မဟာမှူးများက အာဏာသိမ်းရန် နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာ ရှိတော့ကြောင်းကို တင်ပြခဲ့ကြရာ ဘာမှ တိကျတဲ့ အမိန့်မပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ နှစ်ရှည်လများ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်လို့ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့  သဘောကို သိတာကြောင့် အာဏာသိမ်းသင့်က သ်ိမ်းရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ဒီအခါမှာ တပ်တွေဆီကို ဗိုလ်နေ၀င်း ဆင်းလာကြောင်း၊ သူတို့ကို ကျေနပ်အောင် ချွေးသိပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်မကြာမီမှာပဲ တပ်က ထွက်ခိုင်းကြောင်း၊ အကြီးအကျယ် ဒေါပွကြပေမဲ့ ငုံ့ခံခဲ့ကြရကြောင်းများကိုပါ သိရပါတယ်။ ဒါကို ဗိုလ်နေ၀င်းက ဖဆပလပါတီတွေကြားမှာ အရောင်အသွေး ကင်းအောင် နေပြတဲ့ သဘောနဲ့ ပါတီဘက် ယိမ်းတဲ့ သူများလို့ စွပ်စွဲပြီး ဖြုတ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ တပည့်တွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အမှတ်ယူတဲ့ သဘောပေ့ါ။
ကွက်ကျော် ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ဘယ်သူ့ကိုမျှ မထောက်ထားခဲ့ကြောင်းများကို လူဟောင်းကြီးများက ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ “ခိုင်းတော့ သေအောင်ခိုင်းတာပဲ၊ တစ်ခုခု ဖြစ်လာရင်တော့ ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် မထင်နဲ့” လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ အသေးအဖွဲ ကိစ္စများက စပြီး သူများကို လှည့်ပတ်ဖို့ အနိုင်ယူဖို့လည်း ၀န်မလေးကြောင်း၊ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ တချိန်က မြင်းပွဲကို အလွန်ဝါသနာ ပါခဲ့ကြောင်း၊ မြင်းပွဲနဲ့သာ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြောင်း၊ မြင်းသမားလောကမှ သတိပြုလာတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ တချိန်က သူ့ရဲ့  ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးသန်းဝင်းက ရှိစုမဲ့ စုငွေလေးစုပြီး မြင်းလောင်းရန် လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဗိုလ်နေ၀င်းက သိပြီး ဘယ်မြင်းကို လောင်းမှာလဲ လို့ မေးတဲ့အခါ “ဘဇူကာ” ကို လောင်းမယ်လို့ ဗိုလ်ကြီးသန်းဝင်းက ပြောရာ သူ့အတွက်ပါ လောင်းပေးလို့ ခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ သူရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိက လောင်းသဖြင့် ဘေးမှ စောင့်ကြည့်သူများကလည်း “ဘဇူကာ” ကိုပစ်ပြီး လောင်းကြတော့ကြောင်း၊ မြင်းပြေးတဲ့အခါမှာ “ဘဇူကာ” ဟာ ဘိတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ကြီးသန်းဝင်းဟာ အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်ပြီး မှိုင်တွေချနေခဲ့ကြောင်း၊ ဗိုလ်နေ၀င်းကတော့ ဘဇူကာကို မထိုးဘဲ အခြားမြင်းကို ထိုးခဲ့လို့ အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် အလွန်ရွှင်မြူးနေပြီး သန်းဝင်း ဘယ်လောက် ရှုံးလဲလို့ မေးကြောင်း၊ ဗိုလ်ကြီးသန်းဝင်းကလည်း စိတ်မပါတပါဖြင့် လေးရာကျော် ရှုံးကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ငွေ ရှစ်ရာ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Ko Pho Thee said...
Actually, BSPP( ma sa la )did internal conferences regarding 7, July matter in all military commands, and put all the blame on Bo Aung Gyi. I wasaUni student at that time and it was discussed even at UTC. Later, Bo Aung Gyi who was living in May Myo wrote an open letter to Ne Win and put the blame on Kyaw Soe who was home minister at that time. Ne Win was happy to sacrificed Kyaw Soe and demoted him to the position of Ba Na Ta principal. ( political science training college). Whether Bo Aung Gyi or Bo Kyaw Soe dynamited the Union building, the real responsible person is Ne Win as no one dared to do anything without his command or knowledge.